Maxaa ka jira qal-qalka haysta Golaha Sharci-dejinta Jubbaland? – Kalfadhi
Maxaa ka jira qal-qalka haysta Golaha Sharci-dejinta Jubbaland?
Ma yara inta jeer ee ay soo yeertay iney Xukumadda Jubbaland caburiso Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Jubbaland. Waxaa jira Xildhibaanno, sidey sheegteen, markii ay ra’yigooda cabireen laga masaafuriyey Kismaayo, qaar la handaday iyo kuwo intaas inta leysugu daray loo sii raaciyey in Xasaannaddii Xildhibaannimana laga qaaday.
Inta badan waxaa, sida ay Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Jubbaland u sheegeen Kalfadhi, ay sidaas la kulmaan Wakiilladu marka ay kulanka Golahooda uga doodayaan Hindisayaasha Xeerarka horyaala, kuwaas oo ay sheegeen in aysan Xukumadda Jubbaland dooneyn inuu Goluhu wax ku daro ama ka dhimo.
Sida ay Xildhibaannadaas, oo qaarkood sida ay sheegeen, laga saaray Golaha, ugu warrameen Kalfadhi ma joogto Kismaayo cid wax u sheegi karta ama ka sheegi karta Maamulka Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe). Suxufiyiinta joogta halkaas ayey sheegeen iney maamulka amaanaan ama ay iska aamusaan, sida ay hadalka u dhigeen.
Ugu yaraan 4 Xildhibaan ayaa xaaladdaas darteed uga soo baxsaday Kismaayo, waxaana la arrin ah dad kale oo ay ka mid yihiin odayaal-dhaqameedyo qaarkood wax ka soo dhisay Jubbaland, kuwaas oo wax badan la arkay iyagoo ka cabanaya qalabka warbahainta.
“Waxa ka jira Baarlamaanka iyo Kismaayo waxaa ka garan kartaa wariyaasha si xorriyad qowl ah in aysan u hadli karin” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Nuur (Dhaayow), oo hadda ka tirsan Golaha Wakiillada Jubbaland. “Baarlamaanka kama aragti dhiiban karo xeerarka la horkeeno” ayuu hadalkiisa raaciyey.“Nin Baarlamaan ah ama siyaasi ah, amaba wariye ah oo wax ka sheegaya maamulka Jubbaland kama jiro” ayuu Xildhibaan Dhaayow ku yiri Kalfadhi.
Waxa uu sheegay ineysan jirin, Xildhibaan iyo cid kale toona, qof toosin karta Xukumadda Jubbaland. Hase ahaatee, wax xoogaa aad mooddo iney ka dabacsan tahay sidaas uu Xildhibaan Dhaaayow sheegayo, oo kala ra’yi duwanaan ah ayaa hadda laga soo sheegayaa Kismaayo. Waa kaa Xildhibaan Dhaayow isaguba, isagoo jooga Kismaayo, uu sidaas ugu warramayo Kalfadhi.
Balse, Xildhibaanku waxa uu sheegay in uu sidaan ula hadlo Kalfadhi aysan macnaheedu ahayn inuu madax-banaan yahay, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in, marka la fiiriyo, sida loogu dhawaaqay in Golaha uu ka tirsan uu meel mariyey Hindisaha Xeer uu diiday “ay ku tusineyso” buu yiri “sida uu Baarlamaanka Jubbaland u af-duuban yahay” sida uu hadalka u dhigay. “Waxaan ahay Xildhibaanka ay fiirsanayaan shacabka Jubbaland, waana tilmaamayaa wixii qaldan, wixii saxanna waan boogaadinayaa, qatar kasta aan la kulmo” ayuuu yiri Xildhibaan Dhaayow.
C/qaadir Ibraahim Cali, oo ka mid ah Xildhibaano laga saaray Baarlamaanka Jubbaland ayaa u sheegay Kalfadhi in aysan jirin wax madaxbanaani ah, oo ay haystaan Baarlamaankii uu ka tirsanaa ee Jubbaland, isaga oo Xasaanad lehna laga soo masaafuriyey Kismaayo, sida uu hadalka u dhigay.“In aysan haysan madaxbanaani Baarlamaanka Jubbaland maahan su’aal muran ka taagan yahay” ayuu yiri Cabdiqadar Ibraahim.
Waxa uu Kalfadhi la wadaagay sababta uu Xasaanaddiisii Xildhubaannimo ku waayey. “Anniga waxaa Baarlamaanka layga saaray markii aan dalbanay in saddex aqris la marsiiyo xeer Baarlamaanka loo soo gudbiyay, waana nagala diiday” ayuu yiri Cabdiqadar. Waxa uu sheegay in Xukumadda Jubbaland, iyada oo isticmaaleysa awood, ay laashay Sharciyaddii Golaha Waliillada ee ahayd in sharciyada ay u soo gudbiso uu ku sameyn karo wax-ku-daris iyo ka dhimis intaba. “Wixii Madaxtooyada u daneynaya ayaa Baarlamaanka la horkeenaa oo kaliya”. ayuu Xildhibaan hore Cabdiqadar ku yiri Kalfadhi.
Qadiijo Cali Aadan (Kuweyd) waa Xildhibaannaddii ugu dambeysay, oo sheegatay in ay Kismaayo uga soo carartay si ay nafteeda uga badbaadsato Xukumadda Jubbaland, sida ay hadalka u dhigtay. Si la mid ah Cabdiqadar, waxay Kuweyd iyaduna weysay Xildhibaannimadeydii markii ay isku taagtay Xeerka Xuduudaha Jubbaland, oo ay Xukumaddu dalbatay in dib-u-eegis lagu sameeyo, iyaduna ay taas aragti ahaan diidday.
“Jubbaland waxaa qaldan Nidaamka oo dhan. Hogaanka ayaa aaminsan caburin in wax lagu maamulo” ayey Kuweyd ku tiri Kalfadhi. Waxay aaminsan tahay inuusan jirin wax u saxan Xukunadda Jubbaland.“Wey adag tahay inaa ka hortimaado wixii Baarlamaanka la horkeeno, waayo naftaada ayaa halis galeysa” ayay tiri Kuweyd.
Barafasoor Cabdirisaaq Maxamed Cabdi, oo ka mid ah aqoonyahaannadii wax kasoo dhisay Maamulka Jubbaland ayaa taageeray hadalka Xildhibaannada ee ah in aysan madax-banaani ka jirin Guud ahaan Jubbaland, gaar ahaan Baarlamaanka Maamulkaas. “Sharciyada ay meel-mariyaan Baarlamaanka Jubbaland sax maahan” ayuu yiri Barafasoor Cabdirisaaq. “Markasta waxaa loo keenaa xeerar aan laga fiirsan, mana la siiyo fursad ay ku aqriyaan” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Waxa uu sheegay in Hindisayaasha Xeerarka ay meel-mariyeen loogu keenay si kedis ah, oo ay isla sidaas oo kalena ku ansixiyeen, “iyagoon wax diidi karin” buu yiri. Xog wareysiyo uu ka helay Xildhibaannada Jubbaland ayuu sheegay Barafasoor Cabdirisaaq inuu ku ogaaday iney Xubnaha Golaha Wakiillada Jubbaland cabsi weyn ka haysato Xukumaddooda.
Kalfadhi waxa uu juhdi badan geliyey inuu eeddaas ka dhanka ah wax ka weydiiyo Xukumadda Jubbaland, hase ahaatee midna kama aynaan helin Xubnaha Xukumadda oo aan maalmo ku raadinay teleefanka, si ay isu difaacaan ama u qirtaan dhaliisha ku socota. Wali, waxa uu Kafadhi sii raadin doonaa masuuliyiinta Xukumadda Jubbaland, si ay walaaca Golaha Wakiillada wax uga dhahaan.
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in ay Baarlamaanka horyaalaan 29 Hindise Sharciyeed
Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay Miisaaniyadda 2019